10 ट्रेन द्वारा फ्रान्स मा आकर्षक किला | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 ट्रेन द्वारा फ्रान्स मा आकर्षक किला
रेल द्वारा यात्रा जस्तै तपाईं? फ्रान्स जस्तै देशहरूमा अचम्मको महल देखेर जस्तै तपाईं? कि मामला हो भने, त्यसपछि तपाईं सही ठाँउ पुग्नुभएको छ. त्यो किनभने यो लेख छ “10 ट्रेन द्वारा फ्रान्स मा आकर्षक किला” तपाईं फ्रान्स मा दस सबैभन्दा आकर्षक महल को एक निश्चित सूची दिन हुनेछ. अरु के छ त, हामी कसरी रेल तिनीहरूलाई पुग्न तपाईंलाई बताउन छौँ!
1. Chenonceau को CHATEAU
Chenonceau को CHATEAU एक अद्वितीय एक तिनीहरूले एक मिल को नींव मा निर्माण रूपमा छ 16th सताब्दी. तपाईं सजिलै गर्न सक्छन् एक रेल मार्फत पुग्न महल एक धेरै नजिक छ रूपमा स्टेशन. तपाईं यात्रा बाट यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, एक प्रमुख महल गर्न reasonably नजिक शहर.
यात्रा गाडिहरु गर्न नेन्टस
यात्रा गाडिहरु गर्न लिले
2. Chantau को Chateau
को मा स्थित Chantilly एस्टेट, यो महल साँच्चै एक यात्रा लायक तपाईं यसलाई कसरी देखिन्छ हेर्न एक पटक छ. यो केन्द्र नजिक छ पेरिस जो यो एक समीर यात्रा बनाउँछ.
3. Fontainebleau को दरबार
हो, यो प्राविधिक छ एक दरबार, तर जो परवाह, यो मनोरम छ! तिनीहरूले निर्माण Fontainebleau को फिर्ता 12th सताब्दी, र यो अझै पनि प्रभावशाली र राम्रो राखिएको देखिन्छ. यो पनि हो भ्रमण गर्न सजिलो. तपाईं Transilien लाइन आर संग एक घण्टा भन्दा कम मा पेरिस देखि यो पुग्न सक्दैन.
तपाईं भित्र यो भव्य महल पाउन सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय प्राकृतिक पार्क त्यो पेरिस बाहिर ठीक छ. तथापि, त्यहाँ यसलाई जान्छ कि केवल एक शटल छ रूपमा रेल द्वारा यस सुन्दर महल भ्रमण एक बिट मुश्किल छ. कम से कम तपाईं अझै पनि एक आनन्द उठाउन सक्छौं रेल सवारी पेरिस गर्न!
5. Chambord क्यासल
Chambord क्यासल भ्रमण लायक भन्ने साँच्चै mesmerizing र imposing महल छ. यसलाई प्राप्त गर्न, तपाईं Blois को शहर देखि ट्याक्सी वा शटल आवश्यक. तथापि, Blois पुगन फ्रान्स मा धेरै शहर देखि सुलभ छ. तपाईं पेरिस बाट यात्रा एक घण्टा र एक आधा भन्दा कम मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ.
को महल अम्बोइसे फ्रान्स सबैभन्दा आकर्षक महल बीचमा छ. यो पुनर्जागरण देखि वास्तुकला को एक वास्तविक jewel छ. तपाईं एक मार्फत फ्रान्स धेरै शहर देखि रेल द्वारा सजिलै Chateau पुग्न सक्दैन TGV वा सहरी रेल.
7. प्रसिद्ध महल Chateau de Monte-Cristo
हामी अत्यधिक यो प्यारा सिफारिस, प्रसिद्ध Alexandre Dumas रूपमा सानो महल यसलाई निर्माण! तपाईं पुग्न सक्नुहुन्छ मोंटे क्रिस्टो क्यासल सजिलै एक स्थानीय रेल लाइन संग पेरिस सही रूपमा! भनेर मनमा संग, तपाईंले केही अन्य स्थानमा देखि आ हुनुहुन्छ भने तपाईंले कुनै पनि रेल लाग्न सक्छ.
8. अद्भुत महल Chateau d'Azay-le-Rideau
यो एउटा सानो ताल भित्र एउटा टापुमा सही निर्मित साँच्चै भव्य सानो महल छ! यो भन्दा कुनै पनि prettier प्राप्त गर्न सक्दैन. तपाईं यात्रा को शहर आधा एक घण्टा रेल सवारी लिएर सजिलै महल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि तपाईं मात्र महल एक 20 मिनेट पैदल बनाउन आवश्यक छ.
यो फ्रान्स सबैभन्दा आकर्षक महल बीच हुन सक्छ, तर हामी यसलाई समावेश थियो. महल छ इतिहासको धनी, र यो साँच्चै हो मनोरम, मात्र यसको आकर्षक तरिकामा! महल गर्न घनिष्ठ रेल स्टेशन Selestat छ, र तपाईं यसलाई पुग्न सक्दैन स्ट्रासबर्ग वा धेरै अन्य नजिकै शहर.
को Chateau de Pierrefonds पक्कै सबैभन्दा फ्रान्स सबैभन्दा आकर्षक महल बारेमा सूची मा रहेको लायक छ. तपाईं मात्र एक रेल लिएर महल पुग्न सक्दैन Compiegne, त्यसपछि लिएर एक बस गर्न Pierrefonds.
तपाईं रेल यात्रा थप जानकारी आवश्यक छ भने 10 ट्रेन द्वारा फ्रान्स मा आकर्षक किला, तिमी सक्छौ हाम्रो साइट मार्फत सम्पर्क.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-castles-france%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
महल europetravel यात्रा travelfrance
ट्रेन यात्रा चीन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जापान, ट्रेन यात्रा रूस, ट्रेन यात्रा स्पेन, ट्रेन यात्रा यूके, ट्रेन यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका, यात्रा युरोप